ZLHR Fights For Release Of Student Jailed Over Govt Revolt Call | Kubatana
Lawyers from Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) are working on filing an appeal in the High Court challenging the denial of bail of Allan Moyo, a University of Zimbabwe (UZ) student, who was arrested on Monday 7 December 2020 and charged with inciting people to commit public violence after he allegedly called for a revolt against President Emmerson Mnangagwa’s government.
Moyo, a student at UZ, was arrested on 7 December 2020 by Zimbabwe Republic Police officers who charged him with incitement to commit public violence as defined in section 187(1)(a) of the Criminal Law (Codification and Reform) Act as read with section 36(1)(a) of the Criminal Law (Codification and Reform) Act.
On Thursday 10 December 2020, prosecutors told Magistrate Judith Taruvinga that the 23-year-old Moyo, who is represented by Obey Shava of Zimbabwe Lawyers for Human Rights, incited some commuters on 3 July 2020 at Copacabana bus terminus in Harare when he addressed and told them that the time to stage a revolt against President Mnangagwa’s
administration in Zimbabwe was conducive, for the ZANU PF party leader has failed the people of Zimbabwe.
The prosecutors also alleged that Moyo told commuters that President Mnangagwa’s government was not capable of presiding over the country’s affairs as it has presided over the suffering of people in Zimbabwe.
Zimbabwe Lockdown: Day 257 - WCoZ Situation Report